မွေးဖို့နီးလာတဲ့ ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၃၆)ပတ်မှ (၃၉)ပတ်အတွင်း မိခင်လောင်းဟာ ဘယ်လိုခံစားရမလဲ? – BurmeseHearts
မွေးဖို့နီးလာတဲ့ ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၃၆)ပတ်မှ (၃၉)ပတ်အတွင်း မိခင်လောင်းဟာ ဘယ်လိုခံစားရမလဲ?
ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၃၆)ပတ်မှ (၃၉)ပတ်အတွင်းရောက်ရင်ဖြင့် မွေးဖို့နီးလာပါပြီး မိန်းမကိုယ်က ဆင်းတာတွေဟာလည်း ပိုများလာပါမယ်။ ဗိုက်ကြီးကျပ်နေသလို ခဏခဏ ခံစားနေရပြီး ယောင်တာတွေ ၊ နာကျင်တာတွေလည်း ခံစားရတတ်ပါတယ်။
တချို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေကတော့ ထိုကာလအတွင်းမှာ ဗိုက်နာသလိုခံစားချက်မျိုးနဲ့ ဆင်ဆင်တူတဲ့ ခံစားချက်မျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ မီးမဖွားမီအကြိုနာကျင်ရတဲ့ ခံစားချက်ပါ။
BurmeseHearts	 Jul 13, 2015 0